I-Debian + KDE: Ukufaka nokwenza ngezifiso | Kusuka kuLinux
Njengoba ngithembisile, nazi izinyathelo ngesinyathelo ngezinyathelo engizenzile lapho sengifakile I-KDE 4.6 othandekayo wami Ukuhlolwa kwe-Debian. Bengimatasa kancane namhlanje, ngakho-ke ngiyaxolisa uma kungeyona imininingwane njengoba ungathanda.
Namuhla ekuseni ngenze ukufaka okuhlanzekile (kusuka ekuqaleni) kwe Debian, ukuze ngibhale kangcono amaphakheji engidinga ukuwafaka njalonjalo, ngakho-ke uma ulandela lesi sihloko igxathu negxathu, ngeke ube nesizathu sokuba nezinkinga.
Ngokuphathelene nokufakwa kukhona okuhlukile. Imvamisa ngisebenzisa Ukuhlolwa kwe-Debian futhi into enengqondo kunazo zonke ukuthi Ngilande iso le- lesi sixhumanisi futhi ngalokho usuqedile ukufaka. Inkinga ukuthi njengoba umkhawulokudonsa wami engakuvumeli, bekufanele ngisebenzise iso le- Squeeze Debian.
Incomo # 1: Izama ukufaka nge-Debian Testing iso ngezizathu ezimbili:
Kuzoba namaphakeji ambalwa azovuselelwa.
Ubeka engcupheni encane yokuhlangabezana namaphutha wokuncika noma izinto ezinjalo.
Ukufaka, kungaba nge-iso de Cwilisa o Wheezy, kufana ncamashi nendlela engichaza ngayo kule pdf, ngaphandle kokuthi angifaki Imvelo yezithombe, kepha kuphela Izinsiza zohlelo olujwayelekile. Ngalesi siqondisi ngizocabanga ukuthi ukufakwa kwenziwa kusuka esweni le- Testing.
Ngalokhu kwanele ukuze kuthi lapho isiqedile bese siqala kabusha, singangena kudeskithophu yethu entsha sha. Uma ubheka ekugcineni ngingezile I-LightDM futhi ngichaza ukuthi kungani. Lapho sifaka iphakheji kde-i-plasma-desktop, lokhu kuyasifaka I-KDM okuyinto kimi enzima kakhulu, ngakho-ke ngiyifaka esikhundleni sayo I-LightDM. Uma sesinikelile Faka, iwizard izosibuza ukuthi iyiphi esifuna ukuyisebenzisa, ukhethe leyo oyifunayo.
I-LightDM izophinde ifake amaphakheji wesiphakeli sokuqhafaza. Njengoba ngisebenzisa i-Intel, ngivele ngingeze: xserver-xorg-ividiyo-intel, ngale ndlela:
Lokhu kwanele, kepha uma sifuna singafaka uma kuphela, noma ngokuhambisana nalawa, amaphakheji alandelayo:
Angamaphakheji esizothuthukisa ngawo izinhlelo IGtk esizisebenzisayo nezinye izithonjana esizingezayo. Uma ungasebenzisi isikhwama semali KDE ukuphatha amaphasiwedi, ungasusa umphathi wakwallet.
Uma sidlula izinyathelo zangaphambilini ngaphandle kwezinkinga, sifika engxenyeni ethakazelisa kakhulu yayo yonke le nto: ukwenza ngezifiso KDE ukusisindisa abambalwa Mb yokusetshenziswa. Okokuqala sizokwenza ngesandla (nge-console) ukuze kamuva siqhubekele ezicini zokuqhafaza.
Ngeke ngingene emininingwaneni yokuthi iyini Akonadi o I-Nepomuk, ikakhulukazi ngoba kunendatshana enhle kakhulu echaza kahle kakhulu ukuthi umsebenzi wabo ngamunye uyini. Ungayifunda lapha. Ukucisha i-Akonadi ngokuphelele, senza okulandelayo:
autostart = kuyiqiniso
autostart = amanga
Futhi singasusa eminye imiphumela ngokumisa izilungiselelo ze-oxygen. Ngalokhu siyacindezela I-Alt + F2 futhi siyabhala izilungiselelo zomoya-mpilo. Kufanele sithole into enjengale:
Sifaka i-rcconf ukukhubaza njengokujwayelekile amanye amademoni aqala lapho ama-boot system. Endabeni yami enye yalezo engizisusayo yilezi I-KDM selokhu ngisebenzisa I-LightDM. Kufanele uqaphele ikakhulukazi ngalokhu, futhi ungalokothi ususe dbus.
Futhi kuze kube manje lo mhlahlandlela. Ngiyethemba ukuthi ngingangeza izinto eziningi ngokuhamba kwesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » I-Debian + KDE: Ukufaka nokwenza ngezifiso
Ngiyabonga elav ngokugcina izwi lakho +1
Ngiyethemba ukuthi iyakusiza impela ...
Ngiyabonga, sengivele ngenze ngokwezifiso, sizoqala kabusha ukubona ukuthi sihamba ngejubane ngempela, futhi yiziphi izinhlelo engingazenza ngaphandle kwesikhathi sokuqala? Uma ngingakukhathazi kakhulu?
Well kuya ngalokho okufakile. Uma ungikhombisa isithombe-skrini, mhlawumbe ngingakusiza .. 😉
Lapho isho khona into eyi-akonadi, uyibeka emuva, ukuze usebenze i-akonadi okuguquguqukayo kufanele kube ngamanga, kanjena:
Yebo, kwenzeka kimi ngenkathi ngibhala lo mbhalo, ngiyabonga kakhulu 😀
elav ngicabanga ukukhubaza i-akonadi ukubuyela emuva kwendlela oyifaka ngayo kokuthunyelwe.
Ngokususa izinto zokubhala, nokucisha i-Akonadi neNepomuk, nginciphise ukusetshenziswa nge-200Mb, ngiyaneliseka.
Kepha une-RAM engakanani? Ngabe unciphise ukusetshenziswa kakhulu? Hawu .. Kuhle 😀
Ngine-1.5Gb ne-1.3Gb etholakala nge-processor ye-AMD64 dual core, engicabanga ukuthi, njengoba ngifunda kuwebhu, isebenzisa i-RAM engaphezulu kwe-i386. Ngihlela ukuzama ukufika ku-4Gb.
I-kde yami ayikaze ingingene ngenxa yokusetshenziswa kakhulu kweRam.
Ngiyayithanda kepha ngiseGnome Ja
NgeGnome2 ngivumelana nawe kepha ngazama iFedora 15 ngeGnome3 futhi inokusetshenziswa okuphezulu kwe-RAM cishe okulingana ne-KDE, ngiyethemba ukuthi ngentuthuko ithuthukisa ukusetshenziswa.
I-tuto enhle kakhulu… .ja, icishe ifane nokufakwa kwe-Debian enginakho… umehluko ukuthi ngesikhathi ngangiyifaka nge-Squeeze kanti inqubo yayiyi-loooong 🙂
Ngiyabonga Roman77, siyajabula ukuthi uyithandile 😀
Sawubona Elav. Yize ngingakaze ngibe ngumsebenzisi we-KDE, ngithola lesi sifundo sithakazelisa kakhulu. Ngiyakuthanda ukufunda. Ngiyabonga kakhulu futhi ngithemba ukuthi uzoqhubeka nokushicilela okuningi.
Ngiyabonga uCarlos-Xfce, nginethemba lokuqhubeka nokushicilela abanye, ngiqonde ukuthi, uma iGnome ingangibizi, sengivele ngibona ukuthi amaphakheji amaningi we-Gnome3 angena ku-Testing 😀
Ngakuthola kuthakazelisa. Ake sibone ukuthi ngempelasonto ngiyazikhuthaza yini ukuyifaka. Ozithobayo.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, njengamanje ngiqala ukukulandela ... ngifuna ukuhlanganisa i-kernel ye-pc yami kepha angazi ukuthi yimaphi amamojula okufanele ngiwafake, ngine-Toshiba esebenzisa i-AMD Thurion Dual core ene-4 gb ye-RAM futhi lokhu ngumphumela we-lspci:
00: 00.0 Ibhuloho lokusingathwa: Advanced Micro Devices [AMD] RS880 Host Bridge
00: 01.0 ibhuloho le-PCI: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 / RS880 PCI kuya ku-PCI bridge (int gfx)
00: 04.0 Ibhuloho le-PCI: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI kuya ku-PCI bridge (i-PCIE port 0)
00: 05.0 Ibhuloho le-PCI: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI kuya ku-PCI bridge (i-PCIE port 1)
00: 06.0 Ibhuloho le-PCI: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI kuya ku-PCI bridge (i-PCIE port 2)
I-00: 11.0 isilawuli se-SATA: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 SATA Controller [Imodi ye-AHCI]
00: 12.0 Isilawuli se-USB: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB OHCI0 Isilawuli
00: 12.1 Isilawuli se-USB: ATI Technologies Inc SB7x0 USB OHCI1 Isilawuli
00: 12.2 Isilawuli se-USB: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB EHCI Isilawuli
00: 13.0 Isilawuli se-USB: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB OHCI0 Isilawuli
00: 13.1 Isilawuli se-USB: ATI Technologies Inc SB7x0 USB OHCI1 Isilawuli
00: 13.2 Isilawuli se-USB: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB EHCI Isilawuli
I-00: 14.0 I-SMBus: I-ATI Technologies Inc SBx00 Isilawuli se-SMBus (rev 3c)
00: 14.2 Idivayisi yomsindo: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00: 14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 LPC umphathi wesilawuli
00: 14.4 Ibhuloho le-PCI: ATI Technologies Inc SBx00 PCI kuya kwi-PCI Bridge
00: 18.0 Ibhuloho lokusingathwa: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00: 18.1 Ibhuloho lokusingathwa: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Map Map
00: 18.2 Ibhuloho lokusingathwa: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00: 18.3 Ibhuloho lokusingathwa: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Control Miscellaneous Control
00: 18.4 Ibhuloho Lokubamba: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control
01: 05.0 Isilawuli esihambisanayo se-VGA: ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200]
Isilawuli senethiwekhi: Realtek Semiconductor Co, Ltd. RTL02SEvB Wireless LAN Controller (rev 00.0)
Isilawuli se-03: 00.0 Ethernet: Realtek Semiconductor Co, Ltd. RTL8101E / RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
Ingxoxo: Arch Linux vs Debian
Kutholakala ukulanda iFirefox 8